အင်တာနက်နှင့် လူငယ် — MYSTERY ZILLION
ဂျစ်ပဆီလေးတို့ ကိုစေတန်တို့ အားကျပြီးတော့် ကျွန်တော် လညး် ဆောင်းပါလေး တစ်ပုဒ် ရေး ဖြစ်သွား တယ် နော်....အခုရေး တဲ့ ဆောင်းပါးကတော့ ကျွန်တော် ရဲ့ ပထမဆုံးရေးတဲ့ ဆောင်းပါးလေး လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပထမဆုံးစရေး တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် လိုအပ်ချက်လေးတွေ အားနည်းချက်လေး တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေကို MZ မှ ကိုကို ၊ မမ တို့ ကနေ ဖြည့်ဖြည်း ေ၀ ဖန်ပေးကြပါအုံးနော်..........မှားသွားတာလေးတွေ ပါရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်...
ဒီဆောင်းပါးလေး ကို ကျွန်တော့ရဲ့ ဘလော့ မှာ လည်း ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်နော်....ဆောင်းပါးလေးကတော့..အောက်မှာ ပါ ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါအုံးနော်......:6::6::6:.
တစ်ခြားသူတွေ ရေးနေတဲ့ဆောင်းပါးလေး တွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ဒီလိုဆောင်းပါးလေးတွေရေးချင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေ ခဏခဏ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အဲဒီလို ဆောင်းပါးရေး မယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်ပြန်တော့လည်း ဘာအကြောင်းကိုရေးရမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် စဉ်စားလို့ မရခဲ့မိပါဘူး ။အခု ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းလေးတွေရေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်း အရင်း ကတော့ နေ့လည်ပိုင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ပြီး ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း ပြောကြရင်းနဲ့ အခုခေတ်လူငယ်လေး တွေ ရဲ့ အကြောင်း ကို ပြောမိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောဖြစ်ကြတဲ့ အကြောင်း ကို ဆောင်း ပါးလေး ရေး ရင်ကောင်း မှာ ပဲ ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော် စိတ်ကူး ရမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါလေး ကိုရေးဖြစ်သွား တာပါ။ ဒီဆောင်းပါလေး ထဲမှာက ကျွန်တော် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အတွေ့အကြုံ လေး တွေ နဲ့ ယှဉ်တွဲ ရေး သားသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု ခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကြောင်းအရာ ကတော့ အရွယ် ရောက်လာကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေရဲ့ အကြောင်းပါ။ ယခု ကျွန်တော် တို့ ပြောပြောနေကြ တဲ့ Globalization ခေတ်လို့ပြောနေကြတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော် တို့ နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး ဟာ ရွာကလေး တစ်ရွာလို ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို လူအများရဲ့ ပါးစပ်ဖျား မှာ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ Globalization ခေတ်ကြီး မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှ လည်း နည်း ပညာ တိုးတက် ပြောင်း လဲ မှု တွေ ကလည်း တဖြည်းဖြည်း နဲ့ တိုးတက်လာပါတယ်။ နည်းပညာတွေ တိုးတက် လာတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှ လည်း လူကြီး ၊ လူငယ် ၊ လူလတ် မရွေး ကမ္ဘာ နှင့် အညီ ရင်ဘောင်တန်း နိုင်လာ ခဲ့ ကြပါ ပြီ။ အဲဒီလို ကမ္ဘာ နှင့် အညီ ရင်ဘောင်တန်း ပြီးတော့ နည်း ပညပိုင်း ဆိုင်ရာတွေ ၊ ပညာရေး ၊ စီးပွား ရေး နဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း တွေ ကို လည်း အင်တာနက်မှ တဆင့် ရှာဖွေဖတ်ရှု လေ့လာ နိုင််ပြီး တော့ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်နေနိုင်ကြပါပြီ။ အဲဒီလို ဖတ်ရှု လေ့လာ မှတ်သား ရန်အတွက် အင်တာနက်ကို လာရောက်အသုံးပြုကြတဲ့လူတွေထဲမှာ အခုခေတ်လူငယ် လေး တွေကတော့ မပါသလောက်ကို ရှိတဲ့ သဘောပါ။ လူငယ်လေး တွေ အမြဲတမ်း လာရောက်အသုံး ပြုတာကတော့ သူတို့ အတွက် ဗဟုသုတရဖွယ်ရာတွေကို လာ ရောက်ရှာဖွေ ဖတ်ရှုတဲ့ သူတွေ ကတော့ တော်တော် လေး ကို ရှားပါး ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကိုယ်တို်င် အင်တာနက်ဆိုင်တွေ မှာကြုံ တွေ့နေရတာတွေ ကတော့ вЂ¦.
လူကြီး ပိုင်း တွေ ဟာ သူတို့ ရဲ့ သား သမီးတွေ က နိုင်ငံ ရပ်ခြား မှာ သွား ရောက် အလုပ်လုုပ်ကြ ၊ ပညာ သင်ကြ တယ် ဆိုတော့ သူတို့ ရဲ့ သား သမီးတွေ နဲ့ စကား ပြော ဖို့ ရန်အတွက် စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့ တွေ မှာ ဆိုရင် အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ကို လာပြီးတော့ သား တွေ ၊ ဒါမှ မဟုတ် သမီးတွေ နဲ့ စကား တွေ ကို တ၀ ကြီး ပြောဆို အသုံးပြု နေကြတာကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ အဲဒီလို အသံ ( voice ) နဲ့ ပြော ယုံတင်မက webcam လို့ ခေါ်တဲ့ ကင်မရာ တပ် ပြီးတော့ သားသမီးတွေ နဲ့ မိဘတွေ ညီကို မောင် နှမတွေ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် မျက်နှာချင်း ဆိုင် ထိုင် ကြည့် ပြီး တော့ အား ရ၀မ်းသာ ပြောဆိုနေကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်သူတို့ အတွက် ဂုဏ်ယူ ၀မ်းသာ မိပါတယ်။ ဘာကြောင့် လဲ ဆိုတော့ နိုင်ငံ ရပ်ခြား မှာ ရောက်နေတဲ့ သား သမီးတွေ ညီကို မောင်နှ မတွေ နဲ့ ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ထိုင်ပြော ပြော နေကြတာ မှာ တစ်နာ ရီလောက် အားရပါး ရ ပြော မှ ကုန်ကျ စရိတ်က အများ ဆုံး ၅၀၀ လောက်ပဲ ကုန်ကျ တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ပါ။ အဲဒီလို တစ်နာ ရီကို ၅၀၀ ပဲ ကုန်ကျ ခံ ပြီးတော့ အင်တာနက်ပေါ် မှာ မိမိ အတွက် အသုံး ၀င်မယ့် ပညာ တွေ ၊ ဗဟု သုတတွေ ကို ရှာ ဖွေ ဖတ်ရှု မှတ်သား မယ်ဆိုရင် လည်း အချိန် တစ်နာ ရီ နဲ့ ငွေ ၅၀၀ ရဲ့ တန်း ဖိုး ဟာ လည်း တော်တော် လေး အကျိုးကျေးဇူး ကြီးမား လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မိပါတယ်။ သို့သော် ယခု အင်တာနက်လာရောက် သုံးစွဲ နေသူ လူငယ်အများစုမှာတော့ အဲဒီလို အကျိုးကျေး ဇူး တွေ ရ ရှိဖို့ အတွက် လာရောက် အသုံး ပြုကြတဲ့ သူတွေ ကတော့ အလွန်ကို နည်း ပါး ပါတယ်။ အခု လူငယ် အများစု တွေ ဟာ အင်တာနက်ကို အချိန်တွေ အများကြီးကုန်ကျ ခံ ၊ ငွေတွေ အများ ကြီး ကုန်ကျခံ ပြီးတော့ လာရောက်အသုံး ပြုနေကြ ပါတယ်။ သူတို့တွေ အင်တာနက်လာရောက် အသုံး ပြု နေကြတဲ့ အကြောင်း အရင်း ကတော့ သူတို့ အတွက် ဘာအကျိုး ကျေးဇူး မှ မရနိုင်တဲ့ Chatting လာ ထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Chatting ထိုင်ကြတယ် ဆိုတဲ့ နေရာ မှာလည်း မိမိတို့ အတွက် အကျိုး ရှိနိုင်မယ့် နိုင်ငံ ရပ်ခြား မှာ ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ညီကိုမောင်နှမတွေ နဲ့ ဆက်သွယ် စကားပြောဆိုကြ ပြီးတော့ နိုင်ငံ ရပ်ခြား က ပညာရေး အကြောင်း တွေ မေးမယ်၊ အလုပ်အကိုင် အကြောင်းတွေ မေး မယ်၊ နိုင်ငံ ခြားမှာ ဘယ်လို လုပ်ငန်း တွေ လုပ်ရင် ၊ ဘယ်လိုကျောင်းတွေ သွား တက်ရင် အဆင်ပြေ နိုင်မယ်၊ ကောင်းနိုင်မယ် ၊ သူတပါးရဲ့ နိုင်ငံ ကို သွားတော့ မယ် ဆိုရင် မိမိဘက်က ဘယ်လိုကျွမ်း ကျင်မှု တွေ လိုအပ် မယ်၊ ဘယ်လိုပြင်ဆင် မှု တွေ လိုအပ်မယ် ဆိုတာ တွေ ကို ပြောဆို မေးမြန်း ဆွေးနွေး ကြမယ် ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ အတွက် အသုံး ၀င် အကျိုးပြု နိုင်ပါတယ်။
သို့သော် အဲဒီလို အသုံး၀င်သော ၊ အကျိုးကျေးဇူး များပြားသော အကြောင်း အရာ များကို လျစ်လျှူ ရှု ပြီးတော့ ၊ သူတို့ အတွက် အကျိုးမပြုနိုင်သော အသုံး မ၀င်သော စကား များ ကို သာ ပြောဆိုကြပြီးတော့ အချိန်တွေနဲ့ ငွေ တွေ အကုန်ခံ ပြီးတော့ ပြော နေကြတာ ကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ကောင်လေး တွေ က Online ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ တစ်ခြား တစ်နေရာ က ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ စကား တွေ ကို ဖောင်ဖွဲ့ ပြီးပြော ကြမယ်။ ယောကျ်ားလေး က မိန်းကလေး ကိုရည်းစားစကား ပြောမယ် ၊ တစ်ဖက်က ကောင်မလေး ကလည်း ကောင်လေး ကပြော တဲ့ ရည်းစားစကား ကို လွယ်လွယ်နဲ့ ပဲ လက်ခံ အဖြေပေး ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ အပြင်မှာ ဖြူလား မဲလား ဘယ်လိုလူ လဲ မသိဘဲ နဲ့ Online ပါ်မှာ ပဲ ချစ်သူရည်းစား တွေ ဖြစ်သွား ကြပါတယ်။ ပြီးမှ ဓာတ်ပုံ လေး တွေ အပြန်အလှန် ပို့ ပေး မှုလေး တွေ လုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွား ကြတယ် ဆိုတော့ ဒီကောင်လေး က ဒီကောင်မလေး တစ်ယောက်ထဲနဲ့ တင်ပဲ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွား တာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက် က Online ပေါ်မျာ ချစ်သူတွေ အများကြီး ထား ကြသလို မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကလည်း Online ပေါ်မှာ ချစ်သူတွေ အများကြီး ထား ကြပါတယ်။ အဲဒီလို Online ပေါ်မှာ ချစ်သူတွေ အများကြီး ထား ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် အချိန်မရွေးူ အင်တာနက်လာရောက်အသုံးပြုတိုင်း တစ်ယောက်မရှိ တစ်ယောက်ကတော့ ရှိနေတက်ပါတယ်။အဲဒီလို ရှိနေကြတဲ့ အတွက် အင်တာနက်ကို အချိန်တွေ အများ ကြီး အကုန်ခံ ပြီးတော့ သုံးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Online ပေါ်မှာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြပြီးတော့ အပြင်မှာ တစ်ကယ် တွေ့ဆုံးပြီးတော့ အိမ်ထောင်ကျ သွား ကြတယ်ဆိုတာ ကတော့ တော်တော် လေး ရှား ပါး လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မိပါတယ်။အခု ခေတ် လူငယ်ယောကျ်ားလေး တွေထဲမှာ အင်တာနက်မှ Chatting ကို အသုံးမပြုတက်ကြသော လူငယ်လေး များ ကလည်း Game ဆိုင်တွေ မှာသွား ပြီးတော့ အချိန်နဲ့ ငွေတွေ ကို ဖြုန်းတီးနေကြတာ ကိုလည်း တွေ့ မြင်နေကြရပါတယ်။ အဲဒီလို Chatting တွေ ထိုင် Game တွေ ကစား ပြီးတော့ ၊ အချိန်တွေ ဖြုန်းနေမယ့် အစား အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှိတဲံ ပညာရစရာ ၊ ဗဟုသုတရစရာ တွေ နဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှု စေချင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ၀င်ရောက်ရှာဖွေ ဖတ်ရှု တဲ့ အခါ မှာ English စာ ကို ကောင်းကောင်း မကျွမ်း ကျင်၍ နိုင်ငံ တကာမှ တင်ထား သော မိမိတို့ အတွက် အသုံး၀င်သော Website များ ကို မဖတ်နိုင်လျှင်ပင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှ တင်ထား သော ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေ ဗဟုသုတပိုင်း ဆိုင်ရာ ၊ နည်း ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ Website များ ကို မြန်မာလို ၀င်ရောက် ဖတ်ရှု ပြီးတော့မိမိတို့ သိရှိလိုသော အကြောင်း အရာများကို ၀င်ရောက်မေးမြန်း ဆွေးနွေး နိုင်သော မြန်မာ Website အမြောက်အများ တွေ ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကို အသိပေး ရေး သားရင်း ခေတ်လူငယ်လေး တွေ ရဲ့ အသိပညာ ၊ အတက်ပညာ ၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတ အကျိုးကျေးဇူး များကို တိုးတက်များပြား လာစေရန် အင်တာနက်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံး ချနိုင်ကြပါစေလို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော် သတိပေး ရေးသား လိုက်ပါတယ်вЂ¦вЂ¦вЂ¦вЂ¦..
ကျနော်ကို ပြောနေသလားလို့ ထင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ.....
အရင်တုန်းကတော့ အစ်ကိုဆောင်းပါးထဲက အတိုင်းပဲ ချက်တင်းထဲက ကောင်မလေးတွေကို အကုန်ကြူ ရည်းစားစကားပြော ဒီလိုပဲ ....
အခုတော့လား......အခုလည်း chatting ထိုင်နေတုန်းပါပဲ........
အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးနေရင် ဆိုင််ကိုလာကြတဲ့တခြားလူငယ်တွေ အရွယ်စုံပါပဲ ရွယ်တူတွေလည်းပါသလို ညီလေး ညီမလေးတွေလည်းပါတယ်ဗျာ....
သူတို့ဘာလုပ်သလဲဆိုရင် .... ချက်တင်ထိုင်ကြတယ်ဗျ..... သူတို့အတွက် အကျိုးရှိမယ့်ဟာတစ်ခုခုပေါ့ဗျာ............
www.mmenglish.net ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့... www.ielts.org ဆိုလည်းမြင့်တော့မြင့်ပေမယ့် ဖတ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်.........
အင်တာနက်ဆိုတာ သုံးတတ်ရင် အများကြီးအကျိုးရှိတဲ့အရာပါ..... ကျနော်လည်းအခုမှသိတာပါ..... အခုမှလေ့လာတုန်းပါ.....
ချက်တင်ထဲက ကောင်မလေးကို သူဘယ်မှာလဲလို့မေး သူရှိတဲ့ကို Taxi စီးပြီးသွား သူ့လက်ကိုကိုင် ပြီးတော့ နင်ငါ့ကိုချစ်သလားလို့မေး ........
အဲဒါက ပိုရှင်းတယ်ဗျ........ ပြီးရော.......
ကျွန်တော် တို့ဆိုင်မှာဆိုရင် အရှေ့ပိုင်း အင်တာနက် စက်တွေမှာ mz တို့ me တို့စတာတွေကို bookmark လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက အဲဒါလေးတွေကိုကျော်ပြီး flashband ကိုနားထောင်လိုက် ချက်တင် ဝင်လိုက်နဲ့ ဟုတ်ကိုဟုတ်နေတာပဲဗျ။ 100 မှာ တစ်ယောက်ပဲဝင်ဖတ်တာတွေ့ဖူးတယ်ခင်ဗျ
ညီလေးရေ... ညီလေးရဲ့ဆောင်းပါးကတော့ လူငယ်တွေအတွက် အင်တာနက်သုံးတဲ့နေရာမှာ အကျိုးရှိအောင် လမ်းညွန်ပြတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါပဲ ... ကောင်းပါတယ်....ညီလေးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စေတနာနဲ့ လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ ညီလေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....ညီလေး
အစ်ကိုတို့ ဆိုင်မှာလည်း Gtalk မှ မရရင် အင်တာနက်သုံးတဲ့သူကို သိပ်မရှိဘူး...
အားလုံးက Chatting ပဲသုံးချင်နေကြတာ ညီလေးရဲ့ဆောင်းပါးထဲက အတိုင်း ပညာနဲ့ ဗဟုသုတ ရဖို့ အသုံးတည့်တဲ့ website တွေကို လေ့လာသင့်တယ်။